६८ वर्षपछि जेल बाहिर निस्केका वृद्ध गगनचुम्बी भवन देख्दा तीनछक्क परे! - Kohalpur Trends
६८ वर्षपछि जेल बाहिर निस्केका वृद्ध गगनचुम्बी भवन देख्दा तीनछक्क परे!
अमेरिकाका ८३ वर्षका वृद्ध जो लाइगन हालै जेलबाट छुटेका छन्। गत फेब्रुअरी ११ मा उनी ६८ वर्षको जेल जीवन बिताएर थुनामुक्त भएका हुन्। उनी १५ वर्षको हुँदा अर्थात् सन् १९५३ मा जेलमा परेका थिए। डकैती र आक्रमणको घटनामा उनी संलग्न भएका थिए। सो घटनामा दुईको मृत्यु भएको थियो भने ६ जनामाथि च’ क्कु प्र’हा र भएको थियो। उनीमाथि डकैती गरेको साथै ज्या न लि एको आ रोप लागेको थियो।
आजको दिनसम्म पनि उनले ज्या न लि एको विषयालाई भने स्वीकार गरेका छैनन्। झन्डै ७ दशक जेलमा बिताएका जो लाइगन जब जेल बाहिर आए उनी अमेरिकाको विकास देखेर तीन छक्क परे। उनले गगनचुम्बी भवनहरु देख्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताउँछन्। द फिलाडेल्फिया इन्क्वाइररसँग कुरा गर्दै लाइगनले भनेका छन्,‘फिलाडेल्फियामा धेरै परिवर्तन भएछ। म अग्ला भवनहरु हेरिरहेको छु। यी सबै मेरा लागि नयाँ कुरा हुन्। म सानो छँदा यस्तो भवन अस्तित्वमै थिएन।’ डेलीमेल
यो पनि : मोही जग्गामा साक्षी बसेका दम्पत्ती बे प त्ता, घटनास्थलमा देखियो यस्ता चिज
काठमाडौ । महोत्तरीमा एक दम्पत्ती रहस्यमय तरिकाले हराएका छन् । उनीहरु सु ते को ठाउँ पनि रहस्यम देखिएको छ । स्थानियले उनीहरुलाई बे प त्ता पारेको भन्दै छानविनको माग राखेर पिपरा, महोत्तरी सडक खण्ड अवरुद्ध पारेका छन् । महोत्तरीको पिपरा(५ सहोडवाका दम्पत्ती विहान उठ्दा हराएका हुन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दो षी लाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले जलेश्वर–जनकपुर सडकमा गाडी ठ प्प पारेका हुन् ।
सोमबार राति घरमै रहेका सहोडवाका ६५ वर्षीय मोसाफिर झा र ६० वर्षीया गीतादेवी बिहान नभेटिएको परिवारले जनाएको छ ।राति अज्ञात समूहले आएर उनीहरुलाई बे प त्ता बनाएको हुनसक्ने परिवारको आशंका छ । घटनास्थलमा पनि त्यस्तै संकेत देखिएको परिवारका सदस्यको भनाई छ । घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक देखिएकाले दबाबका लागि सडक अवरुद्ध गरेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
दुवै जना सु ते को ठाउँमा र ग त भेटिएकाले घटना शं का स्प द रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक टीकाबहादुर केसीले बताए । उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बिहान झा दम्पती घरमा नभेटिएपछि आफन्तले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।स्थानीयका अनुसार मोसाफिर झा मोही जग्गा वि वा दको मु द्दा मा साक्षी बसेका थिए। अदालतमा विचाराधीन त्यस क्रममा मु द्दा का विपक्षीसँग उनको विवाद भएको थियो। झा मालपोत कार्यालयका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। राति खाना खाएर श्रीमान् श्रीमती बेग्लाबेग्लै कोठामा सु ते का थिए।
Previous Previous post: संक्रमितको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी विधि र रेम्डेसिभिरको प्रयोग प्रभावकारी : स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्
Next Next post: स्टेरिङमा च्यापिएर ट्याक्टर चालकको मृत्यु